XARUNTA DEGMADA HELIWAA OO DIB UDHIS IYO QALABEYN LAGU SAMEEYAY | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR XARUNTA DEGMADA HELIWAA OO DIB UDHIS IYO QALABEYN LAGU SAMEEYAY
Muqdisho (SNTV) Maamulka Degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir ayaa dhawaan waxa ay dib udhis, Qurxin iyo Qalabeyn ku sameeyeen Xarunta iyo Xafiisyada ay ku shaqeeyaan Maamulkaas, si dib loogu soo celiyo bilicda iyo quruxda ay leheyd degmada Heliwaa.
Gudoomiyaha Degmada Heliwaa Mudane Abdulhakiim Omar Abdulle oo wareysi siiyay Wakaalada SONNA ayaa sheegay in asiga iyo maamulkiisu ay ku howlan yihiin sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda iyo amniga degmada, si shacabka ku dhaqan degmada Heliwaa ay ugu dhiiradaan horumarinta deegaankooda maadaama ay saameeyen dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay.
“Anaga Degmada Heliwaa uma imaan in aan ka shaqeysano ee waxaa u imaanay in aan u shaqeyno shacabka dhibaateysan ee ku dhaqan gudaha degmada Heliwaa. Insha allah waxaa qorsheyneynaa in sanadka soo socdo aan ka shaqeyno arimo badan oo ay ka mid yihiin dib udhiska wadooyinka baaba’san iyo furista Xafiisyo ay ku shaqeeyaan Maamulka Waaxyaha Degmada Heliwaa, si loo daadajiyo nidaamka dowlad wanaaga” ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Heliwaa Md. Abdulhakiim Omar Abdulle.
Sidoo kale Gudoomiye Abdihakiin ayaa sheegay in isla sanadkaan ay degmada Heliwaa ka hirgalin doonaan qaar ka mid ah xafiisyada Adeegyada Dowlada Hoose ee ay ka mid yihii xafiiska fasaxyada dhismaha, Xafiiska Dhalashada iyo Sugnaan, Xafiiska Shatiyada Ganacsiha iyo Xafiiska Duplicateka si bulshada ku dhaqan degmada Heliwaa ay u helaan adeeg dowladeed oo dhameystiran.
Ugu danbeyntii Gudoomiyaha Degmada Heliwaa Md. Abdulhakiim Omar Abdulle ayaa shacabka degan degmada Heliwaa waxa uu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka degmadooda si loo suuliyo fikirka qaldan ee laga qabo degmada Heliwaa oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn Gobolka Banaadir.
Previous articleWar-murtiyeed: Kulan Hawleedka Saddex-Geesoodka ah ee Hay’adaha Dastuurka oo soo xirmay
Next articleJabuuti iyo Masar oo ka wada hadlay horumarka Soomaaliya